2014-2017 को लागि उच्च गुणस्तरको SYGAV एन्ड्रोइड कार स्टेरियो रेडियो OEM रकफोर्ड फोसगेट प्रणाली 10.1 HD टचस्क्रिन GPS नेभिगेसन वायरलेस कारप्ले वाइफाइ ब्लुटुथ 5.0 कारखाना र निर्माताहरूसँग Mitsubishi Lancer EVO X Ralliart | SYGAV
SYGAV एन्ड्रोइड कार स्टेरियो रेडियो २०१४-२०१७ को लागि मित्सुबिशी ल्यान्सर EVO X Ralliart OEM Rockford Fosgate System 10.1 HD टचस्क्रिन GPS नेभिगेसन वायरलेस CarPlay WiFi ब्लुटुथ 5.0
के यो DVD नेभिगेसनको लागि एन्ड्रोइड प्रयोग गर्न आवश्यक छ? परम्परागत भन्दा फाइदाहरू के छन्?
1. DVD नेभिगेसन, उपलब्ध प्रणालीहरू WinCE र एन्ड्रोइड दुई श्रृंखला हुन्। साधारण नेभिगेटर WinCE प्रणाली प्रयोग गर्दछ।
2. WinCE प्रणालीको नेभिगेसन अपेक्षाकृत व्यावसायिक छ, र प्लेटफर्म धेरै परिपक्व छ। धेरै व्यावसायिक नेभिगेसन हार्डवेयर प्लेटफर्महरूले यससँग नजिकबाट सहयोग गर्दछ, जस्तै Yuanfeng's।
3. मोबाइल नेभिगेसनको क्षेत्रमा, जस्तै स्मार्ट फोन वा ट्याब्लेट कम्प्युटरहरू, एन्ड्रोइड प्लेटफर्ममा आधारित पोर्टेबल नेभिगेसन पनि सामान्य छ।
4. एन्ड्रोइड को फाइदा यो अपेक्षाकृत पूर्ण मल्टिमिडिया समर्थन छ। हालको समर्थन सफ्टवेयर अनुप्रयोगहरू WinCE प्लेटफर्मको तुलनामा धेरै सुविधाजनक छन्।
5. तर व्यावसायिक नेभिगेसन प्रदान गर्नेहरूका लागि, WinCE बढी परिपक्व र व्यावसायिक छ। मल्टिमिडियाको लागि WinCE प्रणालीको समर्थन कुनै पनि हिसाबले कम छैन।
6, दुई प्रमुख सफ्टवेयर विकास डोमेनहरू (WinCE विकास कम्पनी माइक्रोसफ्ट हो, एन्ड्रोइड विकास कम्पनी गुगल हो) एकदम अविभाज्य छन्।
7. यदि तपाइँ WinCE क्याम्प उत्पादन रोज्नुहुन्छ भने, तपाइँसँग कम्तिमा संस्करण 6.0 वा उच्च हुनुपर्छ, यदि तपाइँ एन्ड्रोइड क्याम्प उत्पादन छनौट गर्नुहुन्छ भने, तपाइँसँग कम्तिमा संस्करण 4.0, मुख्यधाराको न्यूनतम आवश्यकता हुनुपर्दछ।
8. साग र मूलीहरूको आफ्नै माया छ, तिनीहरूको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार छनौट गर्नुहोस्। WinCE विन्डोज प्रणालीसँग उपयुक्त छ, र एन्ड्रोइड लिनक्ससँग उपयुक्त छ।
9. एन्ड्रोइड प्रणालीको नेभिगेसनमा, प्रयोगकर्ताहरूले अनजानमा धेरै सफ्टवेयर स्थापना गर्नेछन्, एकअर्कासँग हस्तक्षेप गर्नेछन्, र सजिलैसँग सफ्टवेयर विफलताहरू फेला पार्नेछन्। प्रणाली सफा राख्न ध्यान दिनुहोस्।
10. WinCE को नेभिगेटरको हार्डवेयरमा कम आवश्यकताहरू र धेरै कम सफ्टवेयरहरू छन्, त्यसैले यो एकल दिमागको नेभिगेसन हुन सक्छ र अपेक्षाकृत स्थिर छ। बारम्बार सफा गर्नु राम्रो हुन्छ।
अघिल्लो: SYGAV एन्ड्रोइड कार स्टेरियो रेडियो 2008-2017 मित्सुबिशी ल्यान्सर EVO X Ralliart बिना OEM Rockford Fosgate प्रणाली 10.1 HD टचस्क्रिन GPS नेभिगेसन वायरलेस CarPlay Android Auto WiFi ब्लुटुथ 5.0
अर्को: 2013-2015 को लागि SYGAV 10.2 एन्ड्रोइड कार स्टेरियो रेडियो Nissan Altima GPS नेभिगेसन CarPlay Android Auto WiFi ब्लुटुथ
एन्ड्रोइड अटो कार स्टेरियो
मित्सुबिशी कार स्टेरियो
टोयोटा कार स्टेरियो
SYGAV 9″ एन्ड्रोइड कार स्टेरियो रेडियो २०१ को लागि...